Kaniisadda Daa'imka ah, Adduunka oo dhan ee Switzerland Switzerland (WKG)
Sababteena ayaa laga yaabaa inay la halgameyso aragtida kitaabiga ah ee ah in Ilaah yahay saddexan yahay - saddex in midna yahay saddexna saddex. Waa inaysan layaab lahayn sababta dad badan oo masiixiyiin ah ay ugu yeerayaan Trinity-ka qarsoodiga. Xitaa Rasuul Bawlos wuxuu qoray: "Sida qof walbaa qirto, qarsoodiga iimaanka waa weyn" (1 Timoteyos 3,16).
Laakiin wax kasta oo heerkaaga fahamka ee caqiidada masiixigu uu yahay, waad hubsan kartaa hal shay: Saddex-jirka Ahaa wuxuu ku xidhan yahay inuu kugu lug yeesho wadaagista cajiibka ah ee nolosha Aabbaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah.
Ma jiraan saddex ilaahyo, laakiin waa mid keliya, oo Ilaahan ah, Ilaaha keliya ee runta ah, oo ah Ilaaha Kitaabka Quduuska ah, waa Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aabaha, wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah waa kuwo isqurxin leh, qof ayaa dhihi kara, taasi waa, nolosha ay wadaagaan ayaa si isku mid ah iskugu xiran. Si kale haddii loo dhigo, ma jiro wax sidii aabbuhu uga soocay wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Oo ma jiro Ruuxa Quduuska ah oo laga soocay aabbaha iyo wiilka.
Taas macnaheedu waa: haddii Haddaad ku jirto Masiixa, markaa waxaad ku lug leedahay wehelnimada iyo farxadda nolosha Saddexmidnimada Eebbe. Waxay ka dhigan tahay in Aabbuhu ku aqbalayo, oo uu xidhiidh idinka dhexeeyo sidii Ciise. Waxay ka dhigan tahay in jacaylka Eebbe muujiyey mar keliya iyo abuuristii Ciise Masiix ay la mid tahay jacaylka uu Aabbuhu mar walba lahaan jiray - had iyo goorna adiga ayaa kuu ahaan doona.
Taas macnaheedu waa in Ilaah Masiixu ku dhawaaqay inaad adigu iska leedahay, in lagu soo daro, inaad tahay mid muhiim ah. Taasi waa sababta nolosha Christian oo dhami ay ugu saabsan tahay jacayl - jacaylka Ilaah ee adiga iyo jacaylka Ilaah ee kugu jira.
Ciise wuxuu yiri: "Qof walbaa wuu garan doonaa inaad xertayda tihiin inaad hadaad is jeclaataan" (Yooxanaa 13,35). Markaad Masiixa kujirto, waad jeceshahay kuwa kale maxaa yeelay aabaha iyo wiilku adigaa kugu dhexjiro Ruuxa Quduuska ah. Masiixa dhexdiisa waxaad xor uga tahay cabsi, isla weyni iyo nacayb kaa horjoogsanaya inaad ku raaxaysatid nolosha Ilaah - oo xor baad u tahay inaad kuwa kale u jeclaatid sida uu Ilaah kuu jecel yahay.
Aabaha, wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ahi waa isku mid, taasoo micnaheedu yahay inuusan jirin ficillo Aabaha oo aan ahayn ficilkii Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.
Tusaale ahaan, badbaadadeenna waxay ka timaadaa doonista aan beddeli karin ee Aabbaha, kaasoo had iyo goor u heellan inuu naga lug yeelo farxad iyo wada noolaanshaha Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aabuhu wuxuu soo diray wiilkii, kaas oo nin noqday aawadeen - wuu dhashey, wuu noolaa, waa dhintay, waa laga sara kiciyey kuwii dhintay, ka dib sidii nin jannada kor ugu qaaday xagga midig ee aabaha sida Sayid, Bixiye iyo Dhex-dhexaadiye kadib markuu ina siiyay nadiifiyey dembiyada. Markaas Ruuxa Quduuska ah ayaa loo diray inuu quduus ka dhigo oo kaamilgaliyo Kaniisadda nolosha weligeed ah.
Tan macnaheedu waa badbaadadaadu waa natiijada tooska ee jacaylka aaminka ah iyo awooda Aabaha, oo si aan loo meel dayin u cadeeyay Ciise Masiix, oo Ruuxa Quduuska ahi na siiyay. Aaminimadaada ma aha mid badbaadinaysa adiga. Waa mid llaahay oo keliya - Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah - oo ah mid ku badbaadiya. Ilaahna wuxuu idin siiyaa rumaysad sida hadiyad ah inaad indhahaaga u furatid runta qofka uu yahay iyo waxaad tahay sida ilmaha uu jecel yahay.